I-Pete's Alpine Studio 1 eneloft - I-Airbnb
I-Pete's Alpine Studio 1 eneloft
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPeter
Kutshanje kulungiswe istudiyo esinesitayile (enye kwezithathu kuphela) esinendawo yokulala ephangaleleyo, kufutshane neMount Buller, eyakhiwe phantse ngokupheleleyo kwizinto zokwakha ezihlaziyiweyo. Konke kuni, esi situdiyo se-rustic esine-balcony yabucala sijonge uMlambo iDelatite sineembono ezintle zeentaba kunye nezilwanyana zasendle ezininzi. Indawo yokutyela emangalisayo iBoMa ikwimitha nje ukusuka emnyango.
Isitudiyo sinendawo ephakamileyo ephangaleleyo nefikelelekayo ngezinyuko zamaplanga. Phezulu apha yibhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkanikazi enemibono yomthi kunye nebhedi yosuku. Kumgangatho ophantsi yindawo yokuhlala, ikhitshi kunye neendawo zokutyela. Kukho i-TV enkulu ye-LCD ene-DVD player kunye nebhedi ekhululekile yesofa elala abantu ababini. Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngefriji, isitovu sombane kunye neehotplates kwakunye nemicrowave. Kukwakho ne-frypan yombane kunye ne-crockery eyaneleyo kunye ne-cutlery. Kubonelelwe ngeti/ikofu/iswekile/icondiments. Ngexesha lasebusika iSitudiyo sishushu kamnandi kwaye sinokhetho oluninzi lokufudumeza kwaye ehlotyeni, i-aircon yomjikelo ongasemva kunye neefeni zesilingi zikugcina upholile.
Ibalcony inemibono ngaphaya koMlambo iDelatite kunye neMount Buller. Amachibi angaphambili kwipropathi alikhaya leentaka ezininzi kunye neekhangaru.
Igumbi lokuhlambela le-rustic liqulethe ishawa, indlu yangasese kunye namampunge. Kukho nesomisi seenwele.
4.84 · Izimvo eziyi-204
Kukho intabalala yezinto ezinokwenziwa kule ndawo. Iindawo zeAlpine zaseMt Buller kunye neMt Stirling kukumgama nje omfutshane wemizuzu engama-20. Ukuba uyakonwabela ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukuhamba ngeenyawo, iwayini entle kunye nokutya kukho intabalala yokuba ukonwabele apha.
Ndihlala kakhulu kwisiza ngaphandle kwasebusika xa ndiphezulu entabeni ndisenza eyona nto ndiyithanda kakhulu! Ndihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kwama-20 kwaye ndingathanda ukwabelana nawe ngolwazi lwam.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Merrijig